यौ-न क्ष’मता बढाउन यसरी गर्नुस् यो-नि र लिं-गको मा’लिस : डा. बास्तोला – KhabarTime
यौ’नचा’हना सञ्चालनमा विभिन्न प्रणाली सक्रिय देखिन्छन् । एक त अन्त:श्रावी गन्थ्रि’को प्रणाली इन्डो’क्राइन सिस्टमअन्तर्गतका रागरसहरूले सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कातिर इ’न्द्रिय प्रणालीका साथमा स्नायुप्रणाली । यसमा मस्ति’ष्कको विशेष भूमिका हुन्छ, किनकि अनेक यौ’न सन्दे’शलाई यस मस्ति’ष्कले नै अर्थ लगाउने गर्छ । हाम्रा यौ’नसम्ब’न्धी विचार, भावना, स्मरण अनि यौ’न परिकल्पनाको स्रोत पनि म’स्तिष्क नै हो ।
सामान्यतया सबैमा धेरथोर यौ’नचा’हना हुन्छ नै । कसैमा कम तथा कसैमा बढी । फेरि एकै व्यक्तिमा समय र परिस्थितिअनुसार फरक हुन्छ । कम हुनुलाई नभएको ठान्ने गरिन्छ, जुन सही होइन । यसैगरी कतिपयलाई यौ’न’स’म्पर्क राख्न मन नलाग्ने स्थिति हुन सक्छ, अर्थात् कम यौ’न इ’च्छा को स्थिति हुन सक्छ ।
यस्तो स्थितिमा यौ’नस’म्पर्क राख्ने चाह’ना, यौ’न परिकल्पना तथा र वा यौ’न क्रि’याकलाप महिनाको दुई पटकभन्दा कम भएको अवस्थालाई जनाउँछ, तर यदि दुवै जना यसमा स’न्तुष्ट छन् भने महिनामा एकपल्ट मात्र यौ’नस’म्पर्क राख्ने जोडीलाई यस स’मस्याबाट पी’डित व्यक्ति भनिहाल्न मिल्दैन । त्यसैले कतिपय यौ’न विशेषज्ञले यौ’न इ’च्छा कम भएको भनेर त्यसबेलासम्म भन्दैनन् जबसम्म यी कुराले सो जोडीलाई यसका कारणले सम’स्या पारेको हुँदैन वा व्यवहारमा कुनै खास परिवर्तन देखिएका हुँदैनन् ।
सुखमय यौ’नस’म्पर्क वैवाहिक सम्बन्धको आधार हो, तर यसमा केही कमी भयो भन्दैमा श्रीमती अर्कातिर लागिहाल्लिन् भन्ठान्नुपर्ने कारण देख्दिनँ । अति नै कम यौ’न’स’म्पर्क भएका बेला मात्रै होइन, अशक्त जीवनसाथी भएको स्थितिमा पनि दाम्पत्य जीवनमा समर्पित नै रहेका अनेक उदाहरण समाजमा छन् ।
पुरुषहरूमा यौ’नको सन्दर्भमा हुने भ’यहरूमध्ये श्रीमती वा यौ’नजोडीलाई यौ’नस’न्तुष्टि दिन सक्दिनँ कि भन्ने एक प्रमुख हो । यस्तो भय भए पनि उसले राम्रो गर्नुपर्ने चि’न्ताले सताउन थाल्छ । शी’घ्र स्ख’लन होस् वा लि’ङ्ग उ’त्तेजना चाहेअनुसार नहुने स’मस्याले सताउँदा चि’न्ता झनै बढ्छ । यसका साथै धेरै चिन्ता गर्ने स्थिति आउँदा कार्यसम्पादनको चि’न्ता ले सताउन थालेपछि सम’स्या झनै च’र्कन्छ ।
श्रीमतीलाई कसरी यौ’नसु-ख दिने ?
मानव यौ’न प्रति’क्रिया च’क्रका बारेमा त तपाईंलाई जानकारी होला नै । यौ’न उ’त्तेजनालाई निरन्तरता दिन सकिए व्यक्ति यौ’न चर’मसु’खको चरणसम्म पुग्छ । विचार गर्नुपर्ने कुरा यौ’न चर’मसुख व्यक्ति आफैंले प्राप्त गर्ने हो, अर्को व्यक्तिले त सहयोग मात्र गर्न सक्छन् । त्यसैले यौ’न उ’त्तेजनालाई निरन्तरता दिन अर्को व्यक्तिको यौ’न संवे’दनशील अ’ङ्गबारे जान्नुपर्छ ।
महिलाको सन्दर्भमा सबैभन्दा यौ’न संवेद’नशील अ’ङ्ग ‘भगां’कुर’ बाहिरतिरै हुन्छ । यसलाई हात वा औंलाले नै चला’एर यौ’न चर’मसु’ख प्राप्त गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ । यो’नि अर्को महत्त्वपूर्ण अ’ङ्ग हो । यसको बाहिरतिरको भाग यौ’न सं’वेदनशील हुन्छ । यो’निमा केही प’साई त्यसबाट घ’र्षण गराएर आ’नन्द प्राप्त गर्न सक्छन् । स्त’न तथा अन्य यौ’न सं’वेदनशील अ’ङ्गको मर्दन, घ’र्षण, अनि चला’उने जस्ता अनेक क्रि’यालापमा संलग्न हुन सकिन्छ । ‘
त्यसबाहेक अन्य अनेक नयाँ प्रयोगहरू गर्न सकिन्छ । पुरुषहरूजस्तै महिलाहरू पनि यौ’न उत्तेज’क दृश्य, स्प’र्श अनि यहाँसम्म कि परिकल्पनाले उजे’जित हुन्छन् । यौ’न क्रि’याकलापमा संलग्न हुँदा पा’क्क्री’डामा संलग्न भएमा यौ’न उत्ते’जना प्राप्त गर्न र चर’मसु’खसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ । यसले यौ’नसम्प’र्कमा संलग्न दुवै जनालाई यौ’न च’रम’सुख साथसाथै प्राप्त गर्न मद्दत पनि गर्छ ।
साथसाथै च’रमसु’ख प्राप्त गर्नु सजिलो कुरा होइन र यो हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । साथसाथै पाइएन भने पीर गर्नुपर्ने आवश्यता छैन, पालोपालो गरेर यौ’न च’रमसु’ख प्राप्त गरे पनि हुन्छ । साथसाथै पाउँदा वास्तविक अर्थमा स’म्भोग बनाउन सकिन्छ । सम्भो’ग अर्थात् ‘सम+’भोग’, जसको अर्थ दुवै जना यौ’नसाथी ले समान रूपमा यस सु’खलाई भो’ग गर्न पाउने कुरा भयो ।
यौ’नस’म्पर्क गर्दा लि’ङ्ग प्रवे’श गराएर सुरु गरिने मा’नसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । महिलाले पर्याप्त रूपमा पा’क्क्री’डामा संलग्न हुने समय पाउनुपर्छ । विशेष गरेर यौ’नस’म्पर्क गर्दा पुरुष मा’थितिर र महिला तलतिर रहने आ’सनमा यौ’नस’म्पर्क गर्दा महिलाको यो’निमा घ’र्षण हुने भए पनि भगां’कुरमा घर्ष’ण हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।